घरटर्कीMarmara क्षेत्र41 कोजेलीबाईस्केले इस्टिकलाल स्ट्रिटमा सुपरस्ट्रक्चरको नवीकरण गरिएको छ
16 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 41 कोजेली, डामर समाचार, साधारण, राजमार्ग, Marmara क्षेत्र, टर्की 0
माथिल्लो संरचना isdekila सडक मा basekele मा नवीकरण गरिएको छ
कोकाली महानगरपालिकाले शहरमा सडक मर्मत, मर्मत र मर्मत कार्यहरू जारी राख्दछ। यस सन्दर्भमा, बाइस्केले जिल्ला डोअनटेप नेबरहुड इस्तिलाल स्ट्रीटलाई सुपरस्ट्रक्चरको कामले नविकरण गर्‍यो। विज्ञान मामिला विभाग द्वारा गरिएको कार्यको दायरा भित्र, एक हजार 400 मिटर लामो डामर काम गरिएको थियो। इष्टिकलाल स्ट्रिटलाई नागरिकहरूले सामूहिक सडकको रूपमा पनि प्रयोग गर्दछ जुन बाइस्केले र कार्टेप जिल्लाहरूको गाउँहरू बीच सम्पर्क प्रदान गर्दछ।
सुपरस्ट्राक्चर THOUSAND 400 मिटरहरूमा नवीकरण गरिएको छ
सुपरस्ट्रक्चरको कामका साथ लाइनमा, एक हजार 400 मिटर डामर tikstikलाल स्ट्रिटमा बनेको थियो।4हजार 500 टन PMT अध्ययनको दिशामा राखिएको थियो र2हजार टन डामर प्रयोग भएको थियो। सडक, जसले माटो सुधार पनि समावेश गर्दछ, आधा मिटर चौडाई विस्तार गरिएको छ।
कार्यहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग गरिनेछ
जुलाई 28 मा विज्ञान मामिलाको विभाग द्वारा आरम्भ गरिएको कार्य टोलीहरुको समर्पित कार्य संगै सम्पन्न गरियो। प्राकृतिक ग्यास र पानीको पूर्वाधार निर्माणका कारण बिग्रिएको इस्तिकलाल स्ट्रीट सडक काम पछि सहज भए।
इस्टिकलाल स्ट्रीटमा सरोकारवाला काम सुरु भयो 01 / 03 / 2018 इस्तांबुल महानगरीय नगरपालिका मेयर मल्टु उसिलले निर्माण गरेको मितिको उद्घोषणा गरेको छ। इष्टिकलाल स्ट्रीट निर्माण कार्य चलिरहेको छ। ऐतिहासिक सडक मा 24 फूलहरु को बर्तन राखयो। इस्टिकलाल स्ट्रीटको मूल र ऐतिहासिक बनावटबाट प्रेरित इस्तांबुल महानगरीय नगरपालिका विभाग उद्यान विभागले भूनिर्माणको दायरा भित्र काम जारी राखेको छ। परियोजनाको दायरा भित्र, 1350 पट्टेको पेटी 24 मीटरको ऐतिहासिक सडकमा राखिएको थियो। टेक्सिम स्क्वायर, अग्जा मस्जिद फ्रान्स, गलाटसारय स्क्वायर, ओडाकुल र सुरंग स्क्वायरको अध्ययनको दायरा भित्र, 20 मिटर बाहेक फूल बल्ब राखिएको थियो। पटहरू जहाँ चारवटा प्रकारका रूखहरू राखिएका छन्, आईआर
बाइस्केल स्टिकलाल स्ट्रिटको मर्मत गरिएको छ 26 / 08 / 2019 कोकाली महानगरपालिकाले शहरमा सडक मर्मत र मर्मत कार्य जारी राख्छ। यस क्षेत्रको अन्तर्गत, बाइस्केले जिल्ला डोअनटेप नेबरहुड इस्तिलाल सडक सुपरस्ट्रक्चरको कामद्वारा मर्मत गरिएको छ। विज्ञान मामिला विभाग द्वारा गरीएको कामहरूको भागको रूपमा, सडकको 700 मिटरमा डामल्डिंग गरिएको थियो। इष्टिकलाल स्ट्रिटलाई नागरिकहरूले सामूहिक सडकको रूपमा पनि प्रयोग गर्दछ जुन बाइस्केले र कार्टेप जिल्लाहरूको गाउँहरू बीच सम्पर्क प्रदान गर्दछ। एक्सएनयूएमएक्स मेटरहरूको थोरैमा काम गर्दै सुपरस्ट्रास्ट्रक्चर इस्टिकलाल स्ट्रिटको हजार 400 मिटरमा काम भइरहेको छ। 400 मिटरको डामर उत्पादन फ्याँकियो जबकि 700 मिटरको डाम उत्पादन जारी छ। 350 मिटर खण्डमा, माटो सुधार कार्यहरू पक्का गर्नु अघि गरिन्छ।…
इस्टिकलाल स्ट्रीटमा नोस्टलिगिक ट्राम 105 हो! 12 / 02 / 2019 नोस्टलिगिक ट्राम को 1914 जन्मदिन, इस्टिकलाल स्ट्रीट को अयोग्य, इस्तांबुल को लागि एक उदासीन महत्व हो र जो इस्तांबुल को मान्छे को लागि 105 मा पहिलो पल्ट मनाया गयो। 105, जो आफ्नो सेवा वर्षको दौरान इस्तांबुल इस्तांबुल ट्रामवे लार्ड भनिन्छ, इस्तांबुलका निवासीहरू पचास वर्षसम्म सेवा गरिरहेका छन्। उत्सव आयोजित भएको थियो। आईईटीटी उप महाप्रबन्धक हसन Özçelik, Hayri Haberdar र अब्दुल Kazdal, कर्मचारी र नागरिक संस्थामा भाग लिन। असक्षम व्यक्तिहरूको आईएमएम निदेशालयले युरोपियन संगीत ग्रुप उत्सवको दायरा भित्र मिनी संगीत कार्यक्रम प्रदान गर्यो। उत्सव कार्यक्रममा, नागरिकहरू, कपास कैंडी, सालप र नोस्टालिगिक इस्तांबुल ट्रिमका चित्रहरू ...
बर्साको डार्मस्टास्ट स्ट्रीटमा वैकल्पिक मार्गहरू 10 / 10 / 2012 बर्सा मेट्रोपोलिटन नगरपालिका, शहरी केन्द्रमा समकालीन परिवहन ल्याउन डिजाइन गरिएको छ - मूर्तिकला - ग्यारेज ट्राम लाइन काम गर्दा यातायात को प्रवाह वैकल्पिक मार्गहरु द्वारा प्रदान गरिएको छ। मेट्रोपोलिटन नगरपालिका ढुवानी विभाग द्वारा बनाईएको बयानअनुसार; ट्राम रेखा काम गरेको इस्पिकिस जंक्शन मा डार्मस्टेड स्ट्रीट र चारसाम्बाको बहर स्ट्रीटको सिग्नलिंग जंक्शनको बीचमा सुरु भयो; स्प्रिंग स्ट्रीट केन्ट स्क्वायरको दिशामा जारी राख्न भन्नुभयो। ट्राम लाइन रेलमार्गको डार्मस्टस्ट स्ट्रीट र वसन्त स्ट्रीटमा काम गर्दछ, ट्राफिक प्रवाह कोट स्क्वायर बाट स्टेडियम स्ट्रीट İpekiş जंक्शन र सडकमा पार्किङ एक दिशामा व्यवस्थित गरिएको थियो ...
सेलिम डार्विसोग्लू स्ट्रीटमा ट्राफिक प्रवाह विनियमन 20 / 07 / 2018 कोकाली मेट्रोपिटिन्टल नगरपालिकाले सडक विस्तारमा परिवर्तन ल्याउँदै आएको छ र ट्राफिक प्रवाहको दिशामा रहेको छ ताकि नगरपालिकाको यातायातमा कम गति बढ्ने हो। यस सन्दर्भमा, सलाम डेरिस्कोग्लु स्ट्रीटमा ओमेर टल्ककाकल बुल्लेर्डमा कुमा क्रीक ब्रिजको विस्तारमा काम अन्त्यमा आउँदैछ। अध्ययनको ढाँचा भित्र, क्षेत्र अन्तर्गत ट्राफिक प्रवाह दिशा निर्देशनहरूमा निर्माण गरिनेछ। नयाँ ट्राफिक प्रवाह निर्देशनहरू एक हप्ता भित्र परिचालन हुनेछ। नयाँ कार्य शुरू गर्न प्रयोग हुने परिवर्तनहरूको दायरा भित्र ओमर तुलकाकल बलवर्ड - न्यायिक पुल - सेलिम डेरिस्सोगोलु स्ट्रीट जंक्शन स्थान, हसन गेमिसी खेल हॉल - Toptancılar साइट ले लिया छ। 42 घरहरू - ...
इस्टिकलाल स्ट्रीटमा सरोकारवाला काम सुरु भयो
बाइस्केल स्टिकलाल स्ट्रिटको मर्मत गरिएको छ
इस्टिकलाल स्ट्रीटमा नोस्टलिगिक ट्राम 105 हो!
बर्साको डार्मस्टास्ट स्ट्रीटमा वैकल्पिक मार्गहरू
सेलिम डार्विसोग्लू स्ट्रीटमा ट्राफिक प्रवाह विनियमन
कोन्या Aziziye स्ट्रीटमा गुणस्तर रेजिजहरू
सेमिम डेरिभोओगोलु स्ट्रीटमा सुरू गर्न दोस्रो चरण
गजल स्ट्रीटमा पूरा गर्न दोस्रो चरण